Archive du 20190902
Mangataka ny hanemorana ny fifidianana Ben’ny tanàna Araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny vovonana Dinike, Atoa Serge Zafimahova, dia mangataka ny hanemorana ny
Rodoben’ny mpanohitra « Idio ny Base Toliara ! »
Nanao ny tatitry ny fidinana ifotony vitany tany Toliara omaly ny filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara, sampana Toliara,
Gérard Rakotonirina -Filohan’ny OJM “Tsy jiolahy akory ny mpanao gazety…”
Andraikitry ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety (OJM), rehefa misy mpanao gazety hatao famotorana na raharaham-pitsarana, dia manana zo izy hanatrika izany,
Fandikan-dalàna tsy vita 58 taona Hovitaina ao anatin’ny 5 taona ?
Mandra-pahatapitry ny 5 taona hiasan-dRajoelina angamba dia ho vitan’ity fitondrana ity angamba ny fandikan-dalàna isan-tsokajiny tsy mbola nisy nahavita tao anatin'ny 58 taona.
Soamandrakizay Androhibe Mpivarotra 250 no nomena fiofanana
Olona 800 000 raha kely no ho avy eto an-drenivohitra hanome lanja ny fahatongavan’i Papa François eto Madagasikara manomboka ny zoma 06 septambra ho avy izao.
Malagasy 26 nihazo an’i Kaomoro Nogadraina ary nogiazana ny antontan-taratasiny
Tsy hanaiky lembenana fa hitory ny fianakavian’izy 26 mianaka kely, teratany Malagasy nihazo ny Nosy Kaomoro andro maromaro lasa izay raha nandeha sambo niala tao Mahajanga.
Fikambanana HAFARI Malagasy Nijery ifotony ny asa fampandrosoana teny Soaniedanana
Nidina ifotony nijery ny fizotry ny asa fizarana ny tany ho an’ireo mpikambana ao aminy teny Soaniedanana, omaly alahady ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Kaominina Ambohijanaka Nahazo lisea manara-penitra
Nahazo lisea ihany ny kaominina Ambohijanaka, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Fako aodina Aotrika an- taonany maro, vao lasa zezika
Herintaona raha kely indrindra, ary folo taona raha ela indrindra ny fanakotrehina fako, izay vao lasa zezika, hoy ny fanazavana azo tamin’ireo mpanao zezika eny Andralanitra.
Fadin-tseranana Malagasy Tsy ampy ny fampangaraharana ny vola miditra
Nanome baiko ny filohan’ny repoblika ny amin’ny fanafainganana ny asam-panjakana sy ny fametrahana ny mangarahara eo anivon’ny fadin-tseranana Malagasy.
Ambongamarina Anjozorobe Resin-tosiky ny dahalo ny miaramila…
Miaramila iray isaky ny tanàna no ao amin’ny kaominina Ambongamarina, Distrikan’ Anjozorobe.